Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Miverina amin'ny fifindra-monina mankany Syria
Avy any Syria ka hatrany Torkia ka hatrany Eropa ary avy eo mankany Syria, ny sidina iray izay miorim-paka ao an-tsain'ny Syriana sasany nandositra ny fifanolanana ary natosiky ny fanantenana hahita fari-piainana tsara kokoa izay mety hanome hoavy azo antoka kokoa.
Taorian'ny dia nandaniam-bola be dia be izay nisy ny fandrahonana ho rendrika an-dranomasina dia tsy ampy ny fisarihana an'i Eropa handresena lahatra ny Siriana sasany hijanona ao amin'ny Vondrona Eropeana. Aleon'izy ireo miaina anaty toe-javatra misy fifanoherana sy ny vokany toy izay ny filaminana.
Manar al-Amid, tovolahy Syriana nahazo diplaoma avy amin'ny Applied Science Faculty an'ny oniversiten'i Damasy, dia nandao an'i Damasy taorian'ny tsy nahitany asa. Nanapa-kevitra ny hifindra monina any Eropa izy noho ny "tombotsoany akademika" fa niverina tany Damsy niaraka tamin'ny "fahadisoam-panantenana".
"Nanery anay hiverina tany an-trano ny fomba fialokalofana henjana" Tonga tany Torkia tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Beirut i Manar. Tao izy dia niondrana an-tsambo iray tsy mety simba niaraka tamin'ny andiana mpifindra monina nankany amin'ireo nosy Greek, izay niampitan'izy ireo ny ala eropeana an-tongotra hatrany Austria, ary tonga tamin'ny Oktobra 2015.
Enab Baladi nanadihady an'i Manar, izay nilazalaza ny dia ho "mampatahotra sy mampidi-doza", ary nilaza fa saika maty an-drano izy ireo taorian'ny vaky ny motera ilay sambo inflatable teny amin'ny ranomasina.
Rehefa tonga tany amin'ny toby any Aotrisy izy dia tsy nahita trano honenana, ka nisy olona iray tao nandefa dokambarotra Facebook niantso ny Aostraliana handray azy an-trano. Ary niaina niaina tamina fianakaviana iray izay misy renim-pianakaviana sy ny zanany vavy.
Na izany aza, roa volana taty aoriana, nifona izy ireo ary nangataka azy hiala tao an-trano satria nisy vahiny tonga hijanona ao amin'izy ireo. Noterena hifindra hipetraka amin'ny fianakaviana hafa izy, izay nolazainy fa tsy mahazo aina sy nampijaly azy ratsy.
Nasongadin'i Manar fa ny antony lehibe nahatonga azy hiverina tany Syria dia ny tsy fahazoany fanampiana ara-bola noho ny fomba henjana momba ny fialokalofana izay nangatahany fialokalofana.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2016, ny firenena eropeana dia nametra ny lalànan'ny fialokalofana ary nanamafy ny fanaraha-maso ny sisin-tany taorian'ny fifanarahana nifanaovan'ny EU tamin'i Torkia tamin'ny martsa 2016, izay nanakana ny fivezivezin'ny mpitsoa-ponenana namaky ny Ranomasina Aegean.
Nilaza i Manar fa matetika izy dia mijery amin'ireo fikambanana sy ivon-toerana mpitsoa-ponenana isan-kerinandro, ary isaky ny milaza aminy izy ireo fa ny anarany dia "mbola tsy voasoratra".
Nanampy izy hoe: “Miaina amin'ny vola alefan'ny fianakaviako avy any Syria aho. Saingy, noho ny fahasamihafana eo amin'ny sandan'ny pound syriana sy ny euro, dia tsy afaka nanohy namindra vola ny fianakaviako ”. Noho izany, taorian'ny efa-bolana dia voatery niverina tany Syria izy.
Mandoa vola amin'ny euro… ary ny fanampiana ara-bola "tsy ampy" Ny mpitsoa-ponenana any amin'ny firenena eropeana dia iharan'ny lalàna "hentitra", izay tsy mitovy amin'ireo any amin'ny fireneny, satria matetika izy ireo dia tsy miraharaha ny sasany amin'ireo fomba fady noraran'ny Eraopeana lalàna.
Yamen al-Hamawi, mpitsoa-ponenana Syriana 19 taona iray izay voatery nandoa onitra maro tany Alemana, dia tsy zatra izany, raha ny filazany tamin'ny Enab Baladi.
Tonga tany Alemanina i Yamen tamin'ny Desambra 2015. Saingy tsy afaka nijanona nandritra ny herintaona mahery izy tany, na dia nahazo visa visa maharitra telo taona aza.
Nilaza i Yamen fa niatrika fahasahiranana maro tamin'ny fianarana alemanina sy ny fampidirana ao anatin'ny fiarahamoniny vaovao izy. Fa ny nanosika azy hiverina any Damaskosy dia ny tsy fahafahany mandoa ny lamandy azony satria "tsy mahalala" ny lalàna alemanina izy.
“Nahazo onitra 800 euro aho satria nampiditra hira tamin'ny findaiko, izay arovan'ny zon'ny fananana ara-tsaina. Io vola io dia avo roa heny noho ny fanampiana ara-bola azoko isam-bolana ”, hoy i Yamen.
Ny lalàna Alemanina "hentitra" izay tsy madiodio amin'ireo mpitsoa-ponenanaEnab Baladi dia nifandray tamina lehilahy Syriana iray, Omar Shehab, izay mahalala tsara ny raharahan'ny mpitsoa-ponenana any Alemana, ary nanazava fa ny lalàna Alemanina dia "henjana" mahakasika ny zon'ny mpamorona sy ny zon'ny mpamorona.
Andininy 63.2 amin'ny lalàna alemanina, izay navoakan'ny fahefana mpanao lalàna taorian'ny fanitsiana farany tamin'ny 2002, dia milaza fa ny lalàna dia tsy tokony hampiharina moramora manoloana ny fanitsakitsahana ny zon'ny fananana ara-tsaina an'ny mpanoratra, ao anatin'izany ny famoronana haisoratra na mozika.
Eo anelanelan'ny 800 sy 5,000 euro ny onitra, ary mety hahatratra telo ka hatramin'ny enim-bolana an-tranomaizina ny sazy.
Julia Ryberg, manam-pahaizana manokana momba ny lalàna ao amin'ny biraon'ny Consumer Affairs, dia niresaka tamin'ny Deutsche Presse-Agentur (DPA) tamin'ny volana martsa 2016 ary nilaza tamin'izy ireo fa tokony hampitandremana ireo mpitsoa-ponenana ny amin'ny fanitsakitsahana ny fananana ara-tsaina alohan'ny handoa onitra.
Nanamafy i Ryberg fa misy tranga izay noterena handoa onitra ireo mpitsoa-ponenana HATSARANA fifanakalozana data "tsy ara-dalàna".
Mpisolovava iray, Henning Werner, izay niresaka tamin'ny masoivoho ihany koa dia nanipika fa tsy hahafoana ny toeram-ponenany ireo mpitsoa-ponenana ary handoa onitra ara-bola fotsiny.
Araka ny antontan'isa navoakan'ny "Ostio", orinasa serivisy sy consultant alemana, maherin'ny 150 tapitrisa euro no aloa isan-taona ho onitra noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny fananana any Alemana.
Ny ahiahy noho ny firaisan'ny mpianakavy dia manaloka ny fiverenany any SyriaOmar Shehab dia nilaza tamin'i Enab Baladi fa ny antony lehibe indrindra manosika ny mpitsoa-ponenana sasany hanafoana ny fangatahana fialokalofana ary hiala an'i Alemana dia ny "fonenana faharoa", izay vao navoakan'ny governemanta alemanina ho an'ny Syriana ao Martsa 2016.
Fonenana maharitra iray taona azo havaozina izy io, izay mamaritra fa tsy maintsy miverina any amin'ny fireneny ilay mpitsoa-ponenana raha mifarana eo ny ady. Ilay olona mitazona io karazana toeram-ponenana io dia tsy afaka mitondra ny fianakaviany ary tsy afaka mandefa fangatahana fananganana fianakaviana.
Araka ny voalazan'i Omar, tanora mariazy maromaro no tsy afaka nandao ny vady aman-janany, indrindra fa ny sasany tamin'izy ireo dia nandao ny fianakaviany tany Torkia irery.
Ho fanampin'izany, ny mpianatra sasany dia tsy manana ny mari-pahaizana ekena any amin'ny anjerimanontolo alemanina ary tsy mahita ny fanampiana tadiavin'izy ireo ho hita. Nanazava ihany koa i Omar fa ny mari-pahaizana bakalorea literatiora dia tsy ekena any Alemana, ary koa ny mari-pahaizana amin'ny anjerimanontolo amin'ny sehatry ny lalàna, fiteny.
Mikasika ny fampidirana ao anatin'ny fiarahamonina eropeana, ny Siriana sasany avy amin'ny tontolo iainana mpandala ny nentin-drazana dia tsy afaka niatrika fiarahamonina malala-tsaina miorina amin'ny fahalalahan'ny eritreritra sy ny finoana. Ny sasany amin'izy ireo dia aleony mitaiza ny zanany amin'ny tontolo onenany, na dia tsy dia azo antoka aza.
Nomena fanampiana ara-bola ireo izay “maniry an-tsitrapo” hiverina any amin'ny tanindrazany… Tsy voaroaka ny Siriana Taorian'ny politika "misokatra" napetraky ny Chancelior Alemanina Angela Merkel amin'ireo mpitsoa-ponenana, dia voampanga ho nanao vesatra ara-toekarena ny fireneny ary nampiharihary izany tamin'ny atahorana "fampihorohoroana". Izany dia nanosika ny governemanta hanangana programa fanampiana ara-bola mitentina 150 tapitrisa euro amin'ny faran'ny taona lasa mba handrisihana ireo mpitsoa-ponenana "hiverina an-tsitrapo" hiverina any amin'ny fireneny.
Eo ambanin'ity programa ity, ny mpitsoa-ponenana rehetra mihoatra ny 12 taona dia homena 1,200 euro raha manapa-kevitra ny hanafoana ny fangatahany fialokalofana izy ary hody.
Mandritra izany fotoana izany, ireo mitady fialokalofana izay nolavina ny fangatahana fialokalofana dia homena 800 euro raha manapa-kevitra ny hiverina any amin'ny tanindrazany izy ireo ary tsy hampiakatra ny fanapahan-kevitry ny fandavana ao anatin'ny fe-potoana avelany.
Na izany aza, nanamafy i Yamen al-Hamawi fa tsy nahazo fanampiana ara-bola izy rehefa nanapa-kevitra ny hiverina any Syria, ary omena ireo mpitsoa-ponenana Afgana ireo sy ireo izay avy any amin'ireo firenena Balkan sy Afrika Avaratra.
Aleon'ny governemanta Alemanina tsy miverina any amin'ny fireneny ireo mpitsoa-ponenana Syriana satria misy ny fifanolanana. Ny ankamaroan'ireo tafaverina dia miala tsy manafoana ny fangatahany fialokalofana, miala amin'ny seranam-piaramanidina Alemanina mankany Gresy ary avy eo dia naondrana an-tsokosoko any Torkia, avy eo mankany Beirut ary avy any Beirut mihazo an'i Damasy.
Vondrona Facebook nantsoina hoe "fifindra-monina mifamadika" Ao amin'ny Facebook, Enab Baladi dia nandinika vondrona maromaro izay manome torohevitra sy fampahalalana momba ny fomba hiverenana avy any Eropa mankany Gresy ary avy eo mankany Torkia. Ohatra, sendra vondrona iray antsoina hoe "Reverse Migration Platform" izahay (izay misy mpikambana mihoatra ny 22,000) ary iray hafa antsoina hoe "Reverse Migration avy any Eropa mankany Gresy sy Torkia", ary vondrona maro hafa.
Ny lahatsoratr'ity vondrona ity dia naneho fa maro ny olona naneho ny faniriany hiala an'i Alemana, raha ny hafa kosa nanontany ny fomba hahatongavany avy any Torkia mankany Gresy ary avy eo mankany Alemana.
"Mpanondrana olona an-tsokosoko" dia nandefa fanambarana tao amin'ireo vondrona momba ny dia tantanin'izy ireo avy any Torkia mankany Gresy, na dia nanamafy ny fomba fiasa fiarovana aza ny firenena roa tonta.
Nilaza i Omar Shehab fa ireo mpanao fanondranana olona an-tsokosoko dia mahita làlana an-dranomasina hatrany izay tsy arahi-maso kanefa nampitandrina an'ireo izay miverina any Damasa amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Beirut izy ireo fa azon'ny fiarovana ny seranam-piaramanidina.
Izany indrindra no nitranga tamin'i Manar al-Amid, izay nanipika fa ny fiarovana ao amin'ny seranam-piaramanidina Beirut dia mitazona azy mandritra ny 48 ora ao amin'ny efitrano maizina iray amin'ny alàlan'ny fanamarinana fa tsy nandray anjara tamin'ny «asa fampihorohoroana» izy. Nilaza izy fa avy eo dia nentina tamin'ny bisy nankany amin'ny sisin-tany Syriana ary natolotra ny fiarovana Syriana, izay namela azy hiditra ny faritany Syriana.
Katathani Phuket Beach Resort: mitahiry tombony lehibe ho an'ny fiarahamonina ny tahiry maitso